Kedu akwụkwọ ị ga-enye ...? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ọ na-abịaru nso, ọ na-esi isi ... Echi, n’ikpeazụ, bụ Bookbọchị Akwụkwọ na ọtụtụ n'ime anyị ga-erite uru ọ bụghị nanị iji zutara iberibe akwụkwọ maka onwe anyị ma anyị ga -emesapụ aka (fọrọ nke nta n'ezie) na anyị ga-enye ufodu nye ndi ozo anyi huru n'anya.
En Akwụkwọ ndị dị ugbu a anyị chọrọ iji mee ka ọrụ gị mfe na-enye gị a usoro nke aro dika mmadu anyi choro inye dika onyinye. Ọ bụrụ na ị na-achọ echiche, nke a bụ saịtị gị.
1 Kedu akwụkwọ ị ga-enye onye gị na ya?
1.1 Ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị bụ nwa agbọghọ ...
1.2 Ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị bụ nwa nwoke ...
2 Olee akwụkwọ ị ga-enye ndị mụrụ gị?
2.1 Maka nne
2.2 Maka ndị nna
3 Kedu akwụkwọ ị ga-enye ndị enyi gị?
3.1 Maka enyi gị nke mkpụrụ obi ...
3.2 Maka enyi gị nke mkpụrụ obi ...
Kedu akwụkwọ ị ga-enye onye gị na ya?
Inwe onye ozo nke soro anyi n'ehihie n'ehihie n'ihe ndina ya nwere akwukwo di nma mgbe nile, ma oburu na ndi nile choro igu dika anyi, anyi choro ihu onye anyi ga ano na akuko oge ahu. Ma ọ bụrụ na ọ naghị eme ya ma ị na-ele anya ya, nke a ga-abụ ezigbo onyinye ịgwa ya.
Ọ na-aga na-enweghị na-ekwu na ị ga-mara, ọbụna minimally, na ibe gi na akwukwo uto inwe ike inye ya akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ịnweghị oge ịchọpụta, mee nchọnchọ n'ọbá akwụkwọ nke ya.
Ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị bụ nwa agbọghọ ...
"Women na-agụ ndị dị ize ndụ" de Stefan bollmann: Ikekwe enyi gị nwanyị ma ọ bụ nwunye gị ga-ele gị anya na mbido ozugbo ị hụrụ aha akwụkwọ a, mana ka m na-agụ ya, ejiri m n'aka na ọ nwere ekele maka onyinye ahụ. Ọ bụ akwụkwọ na na-asọpụrụ ndị nwanyị ahụ niile na-agụ: Dika omenala siri mee ka oru nke abuo na nke ndi mmadu na-achoghi, ndi nwanyi choputara iguta uzo hapu ime ka uwa ha ghara ime. Ọnụ ụzọ ghere oghe maka ihe ọmụma, ichetụ n'echiche, ịnweta ụwa ọzọ, ụwa nke nnwere onwe na nnwere onwe, enyela ha ohere ịzụlite na ịnakwere, obere obere, ọrụ ọhụrụ n'etiti ọha mmadụ. Site na njegharị nke ọtụtụ ọrụ nka na-egosipụta mmekọrịta chiri anya dị n’etiti akwụkwọ na ụmụ nwanyị, Stefan Bollmann na-asọpụrụ ụmụ nwanyị site n’obi ma na-akwado ike pụrụ iche nke ịgụ akwụkwọ na-enye. Obi abụọ adịghị ya, ọ ga-abụ ezigbo nzụta.
"Lovehụnanya, ndị inyom na ndụ" de Mario Benedetti: Ọ dịghị ihe dị mma dị ka onyinye uri nwanyị ị hụrụ n'anya, ma ọ bụrụ na ọ bụ nke Benedetti, ihe niile ga-aka mma. N'akwụkwọ a, Mario chịkọtara abụ ọma ịhụnanya kachasị mma edere, ebe ọ tụgharịrị echiche ya banyere ndụ na ịhụnanya, dịka isi iyi nke ike na-eduzi mmadụ.
"Smilemụmụ ọnụ ọchị nke ụmụ nwanyị" de Nicolas Barreau: A akwụkwọ ọhụrụ, nke ịhụnanya dị nro kamakwa ihe di iche. Ana m akwado akwụkwọ akụkọ a, karịa ihe niile, n'ihi na ọ dị oke ọkụ ma nwee ọmarịcha ihe ọgụgụ ebe enwere ọtụtụ mmekọrịta n'etiti ndị odide ya.
Ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị bụ nwa nwoke ...
"Bruce Lee, nwere ike ime": Akwụkwọ a hụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ nwoke niile n'anya ndị na-achọ ilekọta ahụ ha anya na ndị na-eme egwuregwu egwuregwu ụfọdụ. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ Bruce Lee dere ya n'onwe ya ma chịkọta ụkpụrụ ya, usoro ndị bụ isi, na atụmatụ nkuzi. A na-egosiputa atụmatụ aghụghọ nke Lee na ọgwụgwọ pụrụ iche ya banyere ọdịdị ọgụ, ihe ịga nke ọma site na ọgụ ọgụ, yana mkpa echiche echiche ziri ezi na ọzụzụ gosipụtara.
«N'oge okpomọkụ irughari» de Isi okpu: Maka ụmụ nwoke hụrụ n'anya akụkọ banyere nnukwu Capote. O bu akwukwo na anyi nile guru, n’agbanyeghi nwoke ma obu nwanyi. Grady McNell dị afọ iri na asaa jisiri ike mee ka ndị mụrụ ya kwenye ịhapụ ya naanị na Central Park n'ala ka ha na-aga njem ụgbọ mmiri. Ọ dịghị onye nwere ike ịkọwa ihe mere nwa agbọghọ ahụ ji eleda obi ụtọ nke Europe maka oge okpomọkụ New York na-enwu enwu. Ma Grady nwere ihe nzuzo: ọ hụrụ n'anya. Nke ya bu ihunanya nke gha aghapu ihe ndi di ike. N'ihi na Grady, bụ onye a mụrụ n'ezie na ọkwa nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, hụrụ Clyde Manzer n'anya, nwa okorobịa dị afọ iri abụọ na atọ na-arụ ọrụ ebe a na-adọba ụgbọala ebe ọ na-edebe ụgbọ ala ya. Na Clyde bụ onye Juu, onye agha nke agha - anyị nọ na 1940s, obere oge mgbe njedebe nke Agha Worldwa nke Abụọ - na klas nke obere n'etiti. Ka oge ọkọchị na-aga, na ịma mma nke ahụ na-etolite, ihe malitere dị ka a | Omume ịhụnanya ezumike, ọ ga-adịwanye njọ, nwekwuo obi ọjọọ, nwekwuo nkenke ...
"Mmebi Agha" de Ha jin: Maka ndị hụrụ n'anya akụkọ na akụkọ ihe mere eme na nke agha. Na Machị 1951, eji egbe ogbunigwe nke Russia, obere ngalaba nke ndị agha nnwere onwe nke ndị China gafere Osimiri Yalu dị ka ndị agha na-akwado ndị Maoist iwe megide South Korea. Ya na ngagharị ya, onye isi na-eto eto bụ Yu Yuan, onye hapụrụ nne ya na enyi ya nwanyị ka ọ gaa agha a na-ejighị n'aka na nke ọ ga-esi pụta dị ka onye mkpọrọ nke ndị agha America. N'ịbụ onye nọ n'ogige ụlọ mkpọrọ Pusan, wee banye na nke Koje Island, na South Korea, na-achọpụta na ndị China na ndị Korea na-akwado mba ha maara nke ọma karịa ndị ọdịda anyanwụ na nka nke ịta ndị obodo ha ahụhụ. Tụkwasị na nke ahụ, ozugbo agha ahụ gwụrụ, China nke na-eyi egwu imegwara ndị gbara ọsọ ndụ na ndị sabo na-eme ka nchere a na-enweghị obodo ọ bụla bụrụ ihe nro na-adịghị agwụ agwụ.
Olee akwụkwọ ị ga-enye ndị mụrụ gị?
Ndị nne na nna na-esiri ike inye ... Ha maara anyị nke ọma ma na-abụkarị ihe ziri ezi na onyinye ha, mana anyị nwere obi abụọ ma ọ bụrụ na ha ga-achọ onyinye ahụ. Ikekwe n'ihi na anyị anaghị ahụkarị ihe anyị nwere ike inye ha. Anyị na-atụ anya ị nweta aro anyị ugbu a, mana ị marala na n'akwụkwọ, ihe niile bụ okwu uto.
Na nne ị nwere ike ịnweta ya Akwụkwọ nriỌtụtụ n’ime ha na-enwe mmasị isi nri ma chọpụta ụzọ ọhụrụ na efere ha ga-esi ju anyị anya. Maka ha anyị na-akwado akwụkwọ nke "Foodman's pop kichin" de Mikel Lopez, Blogger gastronomic na-ewetara anyị usoro ọhụụ na ụlọ ọrụ nke ezigbo sinima, egwu na omenala pop.
Ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ime ka ọ chịa ọchị, nke na-adị mma mgbe niile ma na-abata n'aka, ị nwere ike inye ya "Olee ka ọ ghara ịbụ ejije mama" de Amaya bilie. Akwụkwọ a nwere ahịrịokwu 101 nke ndị nne niile na-ekwu na ndụ ha niile na n'otu oge ahụ ha kpọrọ asị mgbe ndị nne ha kwuru ya. Akwụkwọ dị nnọọ ụtọ!
Maka ndị nna
Ihe nne na nna anaghị amasị egwuregwu? Site n'ebe ahụ anyị nwere ike ịnweta echiche. Akwụkwọ nke ya dere Ọkacha mmasị na-amasịkarị ọ ga-abụ ezigbo onyinye maka ya. Ma obu oburu na obu tech hụrụ ma o nwere akwụkwọ elektrọnik anyị nwere ike iji ya mee ya nnukwu onyinye 5 nke 6 ederede na ha nwere ike ịmasị akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ mpụ, wdg.
Ikekwe ihe masịrị gị bụ akụnụba. Ọ bụrụ otu a, anyị na-akwado "Isi obodo: Nkọwa nke akụ na ụba ndọrọ ndọrọ ọchịchị" de Karl Marx kwuru.
Kedu akwụkwọ ị ga-enye ndị enyi gị?
Maka enyi gị nke mkpụrụ obi ...
Maka otu enyi gị nke nọ mgbe niile mgbe ịchọrọ ya, onyinye dị mma karịa mee ya ka ọ chịa ọchị. N'ihi nke a, anyị nwere ike ikwu dị ka onyinye aro ndị bipụtara n'oge na-adịbeghị anya akwụkwọ nke Marta Gonzalez de Vega akpọ «Site na Little Red ịnyịnya ịnyịnya ahịhịa ka She-Wolf na nanị isii deede ', ụdị akwụkwọ ntuziaka na-atọ ọchị nke naanị ụmụ nwanyị nwere ike ịchị ọchị. Anyị kwenyesiri ike na ị ga-ahụ ya n'anya.
Maka enyi ahụ ịchọrọ ịchọta obi ụtọ Nke mbu, olee onyinye dị mma karịa otu akwụkwọ kacha ere ahịa na akụkọ ntolite, maka ịdị mma ya, maka ihe atụ ya, maka mmụta ndụ ọ na-ezube igosi: "Obere Onyeisi" de Antoine de Saint-Exupéry. A na-akọ akụkọ dị mfe ma bụrụ abụ ebe a na-enyocha isiokwu ndị dị ka nzube nke ndụ na ihe ịhụnanya na ọbụbụenyi pụtara.
Anyị na-achọ ka ị nwee obi ụtọ na Bookbọchị Akwụkwọ! Dịkwa ka o kwuru Miguel de Unamuno «CNdị na-erughị gị na-agụ, ihe mmebi eme ihe ị na-agụ ".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Kedu akwụkwọ ị ga-enye ...?
Aga m enye onye ọ bụla Akwụkwọ ikike ka India, nke EM Forster dere.
Ahụmahụ gafere akwụkwọ iji mee emume Day Book